Ukukhethwa kweenoveli ezisondeleyo
Uphengululo lweenoveli ezisenyongweni
UMnu. Wilder kunye nam nguJonathan Coe
Ukukhangela ibali elijongana nendalo iphela eqhubekayo kubudlelwane babantu abasaqalayo, uJonathan Coe ujongana nenxalenye yakhe ekugqibeleleni kwezona nkcukacha ziphambili. Ukuba ewe, uCoe akanako ukukulahla ukuxabiseka okuneenkcukacha okuhambelana neenkcazo ezipheleleyo. Ukusuka…
Umdaniso kunye nomlilo, nguDaniel Saldaña
Ukudibana kwakhona kunokuba krakra njengamathuba esibini othandweni. Abahlobo bakudala bazabalazela ukubuyisela indawo engasekhoyo yokwenza izinto ezingasekhoyo. Ayisiyo nantoni na ngokukodwa, ngenxa yokuba ezantsi ezantsi abanelisekanga, kodwa bafuna nje ...
Izulu Phezulu kophahla, nguNathacha Appanah
Ngubani omnye ongakhange akhuphe iinyembezi kunye neziganeko zikaMarco ekhangela umama wakhe. Ngeli xesha ubudala be-protagonist, uLobo, yayiza kumzisa kufutshane ne-Holden Caulfield (ewe, ulutsha oludumileyo lukaSalinger). Kwaye eyona nto ikwangumfanekiso kamama ...
NgoLwesibini wesibini, ngu-El Chojin
Ibali ngalinye lifuna amacandelo amabini ukuba lifumane uhlobo lokudibanisa, yiyo loo nto imalunga nayo nayiphi na inkqubo-sikhokelo engena kummandla wokulingisa ngokweemvakalelo. Akungombuzo wokuqaqambisa olu hlobo lwamabali amabini phambi komntu wokuqala. Kungenxa yokuba ...
Ulahlekile, ngu-Alberto Fuguet
Kukho amaxesha apho ulwimi luhamba nebali ngokukhanya okuthe ngqo. Kungenxa yokuba ukukhangela umntu olahlekileyo akufuneki ngengoma okanye ubugcisa. Ubungqindilili obulandelanayo benza le ndlela yokuhlangana kwakhona komntu ukwenziwa kobungqina kunye nokusondela ukusisondeza kubo bonke ...
Ezahlukileyo, nguEloy Moreno
Ukulungiswa kakuhle ekufundeni, ukungqinelana okuthile okubalisayo phakathi kukaEloy Moreno kunye Albert Espinosa. Kuba bobabini balanda iinoveli zabo ngeso sitampu sobunyani malunga nokuhamba kobomi kunye neesymphoni zabo zokugqibela ezingacingelwanga zezona zibangela umdla. Kuya kuba yinto enjalo, ngelixa ...
Umhlolokazi, nguJosé Saramago
Ababhali abakhulu njengoSaramago ngabo bagcina imisebenzi yabo ikho ngalo lonke ixesha. Kungenxa yokuba xa umsebenzi uqulethe ukuba ubuntu buchithwe kwi-alchemy yoncwadi, ubuncinci bobukho bufezekisiwe. Umxholo wokubaluleka kwelifa lobugcisa okanye loncwadi ufikelela koko kufaneleka okuyinyani ...